Nkọwapụta Productiondị Mmepụta vidiyo na Nkọwa | Martech Zone
Nkọwapụta na Productiondị Mmepụta vidiyo
Thursday, August 20, 2015 Tuesday, October 6, 2015 Douglas Karr
Anyị nọ n’etiti onye ọzọ onye na-eme ihe nkiri vidiyo ka m na-ede ihe a ma hụ ihe dị ịtụnanya sitere na vidiyo ndị anyị mepụtara, dee, ma ọ bụ kekọrịta. Nke a bu ihe omuma ihe omuma nke oma na imeputa vidiyo na-enye nkọwa nke na-enye usoro siri ike maka ịmepụta vidiyo na -emepụta njikọ aka na ntụgharị.
Yabụ, kedu ka isi mepụta vidiyo na-akọwa ihe ga - eme ka ọnụego mgbanwe gị dịkwuo elu? Iji nyere gị aka pụta, emeela m infographic nke na-emebi usoro nke okike nke vidiyo nkọwa zuru oke. Neil Patel, Ngwa ngwa.
Anyị ekenyela otu onye nkowa vidiyo na vidiyo nkọwa na ị nwere ike ịchọ ịlele. Na anyị na-akọrọ nnọọ ole na ole ihe atụ nke vidiyo na-akọwa, ọ bụ ezie na infographic a sitere na Quicksprout nwere ọbụna karịa!
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịhụ ndu ọzọ na Nkọwapụta Production Video, lelee McCoy Productions Ntuziaka na Nkọwapụta vidiyo nke Nkọwapụta.
Nanị mmelite m ga-eme na infographic a bụ onye na-eme ihe nkiri vidiyo nzọụkwụ akọwapụtara. Nzọụkwụ 2 bụ edemede na nzọụkwụ 3 na-ede akụkọ vidiyo na isi. Ekwenyeghi m… ma na-ekwusi ike imeputa ihe nlere nke ihe obula jiri edemede kwesiri ekwesi, ma debe ya na mgbidi ma obu na tebulu, na enye nkọwa doro anya banyere ịdị mfe na ngwangwa nke vidiyo onye nkowa. Onye ọ bụla na-ese vidio anyị na-arụkọ ọrụ ewetawo nke a ma ọ na-echekwa ụda oge mmepụta.
A sị na anyị ga-agagharị na-aga n'ihu na vidiyo ahụ mepụtara, anyị nwere ike ịla oge n'iyi na ihe nkiri na-akpali akpali nke a na-agaghị eji, ma ọ bụ na-efu mmepụta nke ihe nkiri ndị achọrọ ịgbakwunye. Dị nnọọ ka mockups nke ngwa ịzọpụta mmepe oge, idaha mockups ga-azọpụta gị a ton nke mgbalị gị na akọwa video mmepụta.
Tags: mepụta vidiyo na-akọwankọwa videoonye na-eme ihe nkiri vidiyo
Ihe 4 ị kwesiri inwe na ọdịnaya ọ bụla
Ingghọta Ihe Okike Na-ebute Ọgbọ